शरीरलाई किन चाहिन्छ 'सुनभन्दा पनि गुनिलो नून' ?
Thu, Dec 5, 2019 at 10:44pm
शनिबार, २१ आषाढ २०७६,	आहाखबर	1.83K
नूनमा क्यालोरी, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट केही हुँदैन । अप्रशोधित नूनमा चाहिँ केही मात्रामा खनिजहरु हुन्छन् । तर पनि हाम्रो शरीरलाई नून नभई हुँदैन ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ खानाको स्वाद बढाउन वा खानालाई स्वादिलो बनाउन नून चाहिन्छ । एक हदसम्म यो पनि ठीकै कुरा हो । किनभने, नूनबिनाको खानेकुरा हामीलाई स्वादिलो लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो प्रायः खानेकुराहरुमा नून कुनै न कुनै रुपमा समावेश भएकै हुन्छ ।
तर नूनको महत्त्व खानालाई स्वादिलो बनाउने अर्थमा मात्र हाम्रो शरीरको लागि उपयोगी छ भन्नु पटक्कै वस्तुसम्मत हुँदैन ।
वास्तवमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नून हाम्रो शरीरको लागि एक अपरिहार्य तत्त्व नै हो । त्यसैले के पनि भनिन्छ भने, नून सुनभन्दा पनि गुनिलो हुन्छ ।
नून एउटा रासायनिक यौगिक हो । यसलाई सोडियम क्लोराइड भनिन्छ । हामीले खाने नूनमा सोडियम र क्लोरिन तत्वका अतिरिक्त पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट्सहरु पनि हुन्छन् । मृगौलामार्फत् हाम्रो शरीरमा पानी निश्चित मात्रामा कायम राखिराख्न तथा शरीरमा एसिडको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न नूनमा भएका यी पदार्थहरुले पनि हामीलाई मद्दत गर्दछ । शरीरमा नूनको आवश्यक मात्रामा आपूर्ति हुन सकेन भने, मृगौलाले हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । साथसाथै, शरीरमा एसिडको मात्रा पनि बढ्न जान्छ । यसले गर्दा शरीरमा अनेकौं समस्याहरु देखापर्न थाल्छ ।
नून दुईथरिका पाइन्छन् । एउटा हामीले खानेकुराहरु बनाउँदा हालिने नून, अर्को चाहिँ तरकारी फलफूल तथा अन्य खाद्य पदार्थमा प्राकृतिक रुपमा नै पाइने नून । हाम्रो शरीरलाई नूनको आवश्यकता पर्ने भए पनि यो आवश्यकता तरकारी, फलफूल तथा नट्स (बदाम, काजु आदि) बाट नै पूरा हुन्छ ।
हामीले आफ्नो दैनिक खानामा यी खाद्यपदार्थहरु समावेश गर्ने हो भने शरीरको लागि आवश्यकता पर्ने नूनको आपूर्ति ती खाद्य पदार्थहरुबाट नै हुन्छ, हामीले थप नून खाइरहनै पर्दैन ।
खानेकुरामा पाइने नूनलाई जैविक नून भनिन्छ । जैविक नूनका मोलेक्यूल्सहरु अन्य जैविक पदार्थहरुको भन्दा अलि जटील हुन्छ । त्यसैले हामीले खाएको जैविक नूनलाई हाम्रो आमाशयले अति सुस्त गतिमा सोस्ने गर्छ । तर त्यसको विपरीत, खानेकुराहरुमा अतिरिक्त हालिने नून चाहिँ आमाशयले अति चाँडो सोस्छ ।
उत्तर अमेरिकी क्षेत्रमा मुटुको रोगबाट धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण नै पनि यही नूनको अत्यधिक प्रयोग नै मानिन्छ ।
यसरी सोसिएको बढी नून शरीरको लागि आवश्यक पर्दैन । यस्तो बढी नूनलाई रगतको माध्यमबाट मृगौलाले छान्ने काम गर्छ । तर अति छिटो सोसिने नून मृगौलाले नछानिन्जेलसम्म शरीरको कोषहरु का बीचमा संग्रहित हुन्छ । यसरी संग्रहित नूनले कोष वरिपरिका तन्तुहरुलाई जलाउन थाल्छ ।
त्यस असरलाई रोक्न कोषहरुले कोषभित्र नै पानी पैदा गर्छ जसले नूनलाई घोलेर त्यसको जलन कम पारिदिन्छ । यसरी पानी पैदा गर्दा कोषको तन्काइ हट्न जान्छ फलतः त्यहाँ चाउरी पर्छ । यस क्रियामा कोषहरुमा रहेको पोटासियम समेत घटेर कोषको रासायनिक संरचनामा नै परिवर्तन आउँछ ।
तर हामीले सधैैं बढी नून खाइरह्यौं र शरीरमा माथि उल्लिखित क्रिया–प्रतिक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी नै चलिरह्यो भने शरीरका कोषहरुको पानीको मात्राको सन्तुलनमा आउने हेरफेरले मांसपेशी, रक्तसंचार प्रणालीका भल्भहरु र मुटुसम्म रगत पुर्याउने आर्टरीहरुमा अम्लपन बढाउने, कडापन पैदा गर्ने, खाटा बसाउने तथा त्यसलाई नष्ट गर्ने खतरा बढ्छ ।
कालान्तरमा यसले मुटुलाई नै काम नलाग्ने समेत बनाइदिन सक्छ । उत्तर अमेरिकी क्षेत्रमा मुटुको रोगबाट धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण नै पनि यही नूनको अत्यधिक प्रयोग नै मानिन्छ ।
घातक पनि हुन सक्छ नून
एक औंस नूनले हाम्रो शरीरमा ६ पाउण्ड अतिरिक्त पानीको जरुरत पैदा गरिदिन्छ । धेरै मात्रामा नून खाएपछि हाम्रो शरीरमा धेरै नै बढी पानीको जरुरत पर्ने हुन्छ, जुन एकै पटकमा आपूर्ति हुन सक्दैन । फलतः शरीरमा पानीको भीषण कमी हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै धेरै बढी मात्रामा खाएको नून घातक हुने गर्छ ।
नूनको प्रयोग कहिलेदेखि ?
अझै पनि मध्य अफ्रिकाका कतिपय स्थानहरुमा नूनलाई विलासिताको वस्तु मानिन्छ । त्यहाँ नूनलाई धनी मानिसहरुले मात्रै उपयोग गर्न सक्छन् ।
प्राचीन रोमनकालमा तलबको रुपमा नून
यसरी गरिन्छ स्वास्थ्यमाथि खेलाँची, औषधि पनि गुणस्तरहीन